ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: အမျီုးကေါင်းသား
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် နတ်တော် လဆန်း ၈ ရက်
တင်ခဲ့ပြီးသောပိုစ့်များ : 2359
Total Comments : 786
Phone အလကား ပြောမယ် LINE 3.2 For Pc & Mobile
Face book မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်နှစ်ယောက် Unfriends လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ သိချင်သူတွေအတွက်
Face book မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်နှစ်ယောက် Unfriends လုပ်သွားလည်းဆိုတာ သိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Firefox နဲ့ face book ကို ဖွင့်ထားပါ အရင်...
Mobile iPhone / Android / Windows / BlackBerry PC Windows / Mac OS X မှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် http://line.naver.jp/...
Tattoo အပြင်မှာ မထိုးဘဲ ဓာတ်ပုံမှာလန်းချင်သူတွေအတွက် For Android
ပုံထဲမြင်ရသလိုပါဘဲ Tattooကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံထည့်ပြီး face book မှာလန်းရပီပေါ့ဗျာ play.google မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ...
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွန် စာအုပ်
အင်တာနက်စသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ် စာအုပ်လေးပါ http://myanmarplay.com/ မှာတင်ထားတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် Dow...
နောက်ဆုံးUpdate ဆောစ့်ဝဲလ်တော်တော်များများ အတွက် လိုင်စင်ကီး
3D Studio Max4:::: Number:226-19791979 / CD Key:XLSQBQ9zfll2WrZc+Vn0hWaw2dV/ sccwKwsWY05TPwHden Acrobat Distiller - WAW210P712118...
အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများယူသွားနိုင်ပါတယ် Download>>> mediafire (or) minus Ref>>>http://www.pyayblogger.blogspot.com/
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ် မြန်နှုန်းမြင့်ဆောစ့်ဝဲလ်
အခြားဆောစ်ဝဲလ်တွေလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒီကောင်လေးတင်ပေးရတာက အခြားဆောစ့်ဝဲလ်တွေနဲ့မတူလို့ပါ အခြားဆောစ့်ဝဲလ်တွေက အသုံးပြုတဲ့အခါ ကွန်ပျူတာ...
Windows 8 Media Center Pack Free လိုင်စင်
လိုင်စင်လိုချင်တယ်လို့ပြောနေတာတွေ့လို့ရှာပေးလိုက်တာပါ အချိန်ကန့်သတ်ထားပါတယ် October 26, 2012, until January 31, 2013 အထိပါ http:/...
10:09:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
စက်ဘိန်းပြိုင်ပွဲဂိမ်း ကစားချင်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါစေဗျာ play.google မှာလည်း Free ပေးပါတယ် Apk download>>>go4up Obb Download>>>>go4up Install the APK Copy 'tv.billygoat.crc' folder to '/sdcard/Android/obb' Launch the Game ...
Scientific Calculator For Nokia S60v3,S60v5 And S^3 Anna ...
Asphalt7HD v1.0.0 Android-P2P
Handy Safe Pro For Android & Symbian
City Defense v2.2 For iPhone iPod Touch
Auto Call Recorder Pro v3.21 For Android
10:01:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
ဒီကောင်လေးကိုတော့တော်တော်များများသိမှာပါ play.google မှာ204ဘတ်တန်တဲ့ App ပါ ကြိုက်ရင်ယူသွားနိုင်ပါတယ် Download>>>go4up &nbsp...
Rovio Mobile.Angry Birds Seasons -Year of the Dragon- ...
Filesonic Wupload Premium Account 12/12/11
Angry Birds Space Premium(25MB) For Android
အင်တာနက်နှင့် email အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
ကလေးတွေမကြည့်သင့် ဆိုဒ်တွေကို မကြည့်ရအောင် ပိတ်ထားမယ့်သူတွေအတွက်
9:53:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
Salfeld Child Control ခေါ်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ Download>>>go4up Rar Pass>>>www.amyokaungtarr.com အသုံးပြုနည်း (နေမင်းမောင်ဆိုဒ်ကကူးလာတာပါ) ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ Key ထည့်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပထမဆုံး ဖြစ် Time Limits ကနေစကြည့်တာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ PC ရဲ့အချိန်ကို မိမိတို့ လိုသလို ထိန်းချူပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကတစ်ဆင့်ကတော့ Internet သုံးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုလည်း မိမိတို့လို အပ်သလို ထပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ...
Free ဆိုဒ်တော်တော်များများက premium အကောင့်မရှိဘဲဒေါင်းချင်သူတွေအတွက် MiPony+Portable
9:29:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ် ဒါကြောင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဆိုဒ်တော်တော်များများကနေဒေါင်းလော့လုပ်လို့ရပါတယ် အပေါ်ကပုံက နမှုနာလုပ်ထားတဲ့ပုံပါ Download>>>go4up Portable Download>>>go4up အောက်ကဆိုဒ်တွေကို support လုပ်ပေးပါတယ် Changes in this version: -Added premium and free accounts support for 4shared.com -Added extabit.com premium support -Updated Brazilian-portuguese translation (thanks to Felipe). -Updated Turkish translation (Thanks to FaraDelisi). -Updated Catalan translation (thanks to Marc). -Updated Japonese translation (Thanks to Tilt). -Updated share-online.biz -Updated netload.in -Updated filefactory...
အရင်က တော Beta ဗားရှင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့ အခုကတော Final ဗားရှင်းကိုရောက်လာပါပြီ Windows 8 အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပါစေဗျာ Downlaod>>go4up Features and Benefits of Windows 8 Manag...
နှစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်တဲ့ဂိမ်း For Android 8MB
8:56:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
8MB ထဲရှိပါတယ် play.google မှာ ဘတ်ကိုးဆယ်ပေးရတဲ့ဂိမ်းပါ download>>>mediafire (or)go4up &nbsp...
ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်း အလန်း for Android 56MB
8:32:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
ဒီဂိမ်းကိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ် တော်တော်များများ ကြည့်ဖူးမှာပါ သူက ဘေးတစ်ခြမ်းစောင်းပြီးတော့ မောင်းရတဲ့ဂိမ်းပါ Download>>>mediafire (or)go4up Install the APK Copy 'com.vividgames.speedwaygp2012' folder to '/sdcard/Android/obb' Launch the Game ...
8:08:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
Face book က ညီတစ်ယောက်မေးလို့ ပိုစ့်အဖြင့်တင်ပေးလိုက်တာပါ FLV ဖိုင်ကနေ MP4 ပြောင်းချင်သူတွေအတွက် ပါ http://www.flvtomp4converter.com/ မှာရယူနိုင်ပါတ...
ဓာတ်ပုံကို effects အလန်းနဲ့လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Super Photo For Android
7:59:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
effects တွေတော့တော်တော်စုံပါတယ် play.google မှာ122ဘတ်ပေးရတဲ့ App ပါ Download>>>mediafire ...
Offline ကနေ Gmail အသုံးမယ့် သူတွေအတွက်
7:37:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
ဒါကတော့ အင်တာနက်မရှိတဲ့အချိန်မှာ ဂျီးမေးဖွင့်ဖတ်တာ မေးပို့အတွက်ရေးတာတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် Offline ကနေ Gmail အသုံးပြုဖို့အတွက် Google Chrome ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် အ၇င်ဆုံး Google Chrome ကိုဖွင့်ပါ ပြီးတော့ https://chrome.google.com/ ကိုထဲဝင်ပြီးတော့ Chrome ထဲကို Install လုပ်လိုက်ပါ လုပ်ပြီးသွားရင် Chromeမှာ အခုလိုပုံစံလေးတွေရမှာပါ အဲဒါဆို Gmail offline ကိုကလစ်ပါ ပြီးတော့ Allow offline mail ကို အမှတ်ပေးပြီး continue ကိုကလစ်နိုပ်လိုက်ပါ အခုလိုပုံစံလေးတွေ့ရမှာ ဒါဆို ဂျီမေးတွေကို အင်တာနက်ဖြုတ်ထားပြီး အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖွင့်ဖတ်နိုင်ပါပြီ ရေးပြီးတော့ ပို့နိုင်ပါပြီ Google Chrome အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ...
စစ်တိုက်ဂိမ်း ရှယ်အလန်း For Android Game 137 MB
ဒီဂိမ်းကတော့ အရမ်းလန်းတယ်ဗျာ တကယ်ဂိမ်းကြီးထဲကအတိုင်းဘဲ ကစားရတဲ့သူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေမှာပါ play.google မှာလည်း free ပေးပါတယ်ခ...
Virtual DJ Pro 7.3 | 31.35 MB
DJ တီးလုံးကလိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Atomix Virtual DJ Pro 7.3 တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Install လုပ်၇တာလည်းလွယ်ပါတယ် ပါလာတဲ့ဖိုင်ကို Instal...
Night Camera v2 For Android 3Mb
ညဘက်ကင်မရာရိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် play.google မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် Download>>> mediafire (or) go4up
Microsoft Office 2013 အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် လိုင်စင်အတွက် အခက်ခဲဖြစ်ရင် ဒီကီးဂျင်လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ Downl...
Train Conductor 2: USA v1.3 For Android(19MB)
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ရထားတွေ မတိုက်မိအောင် လမ်းကြောင်းတွေ ရှင်းလင်း လွဲပြောင်းရတဲ့ဂိမ်းပါ play.google မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် Download>>> go4...
Smart Volume Control + v1.0.1 For Android
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် သူက ဖုန်းစကားပြောသံ စသည်ဖြင့် ဖုန်းထဲက အသံအားလုံးကို တိုးတာ ကျယ်တာ လုပ်လို့ရပါတယ် play.googl...
ကလေးတွေမကြည့်သင့် ဆိုဒ်တွေကို မကြည့်ရအောင် ပိတ်ထား...
Free ဆိုဒ်တော်တော်များများက premium အကောင့်မရှိဘဲေ...
ဓာတ်ပုံကို effects အလန်းနဲ့လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Supe...
ကားပြိုင်ဂိမ်း အလန်း For Android 172MB
European War3v1.06 for Android Game 35MB
AVG Antivirus 2013 All Serial
Username and Password Updated(KEYS 19.11.2012 )
Avast Internet Security License ( 13.04.2013 )
Zombie Evil v1.03, Android Game 23MB
တံတားဆောက်တဲ့ဂိမ်း For Android 27MB
Angry Birds Star Wars v1.0.1 For Pc 57MB
Call of Mini: Double Shot v1.1 For Android Game
Beat Hazard Ultra v1.3 Apk (19MB)
The Voice Weekly ဂျာနယ်ကို iPad ဖတ်ချင်သူတွေအတွက်...
မြို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဂိမ်း For Android Game (222MB)
Clouds & Sheep Premium for Android Game 30MB
International Snooker Pro THD v1.3(44MB)
သံစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်းဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်ACID™ Musi...
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွန် စာအုပ်...
Folder Lock 7.1.6 Final
Samsung Galaxy Tab210.1 Root လုပ်နည်း
နှစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်တဲ့ ဂိမ်း For Android 23MB
System Speed Booster v2.9.7.6
Keys 18 November 2012
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများလား ? PDF
GyroSpace 3D Live Wallpaper v1.0.1(4.6MB)
Plants vs. Zombies Game for Android (78MB)
MacX DVD Ripper Pro Free လိုင်စင်
လိမ္မာယဉ်ကျေး တို့ရင်သွေး (ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းကိုင်စာအ...
Face book notification တက်လာတိုင်း မြင်ချင်တယ်ဆိုရ...
Face book မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်နှစ်ယောက် Unfriends လုပ...
လေယာဉ်ငယ် မောင်းချင်သူတွေအတွက် For Android Game(31...
Puffin Web Browser For Android (7MB)
Fast Pro for Facebook (Beta) v1.92 for Android
Shwebook အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ (မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်) အဘိဓာန်
Xilisoft HD Video Converter 7.6 (35MB)
တည်းဖြတ်ချင်သူများအတွက်Wondershare Video Editor
Advanced Batch Converter 5.8MB
Internet Download Manager 6.12 Build 25 Final (11....
Alone in the tower v1.0 Android Game 15MB
Internet Download Manager 6.12 Build 24 Final Por...
Flick Traffic v1.0 For Android Game
Tattoo အပြင်မှာ မထိုးဘဲ ဓာတ်ပုံမှာလန်းချင်သူတွေအတွ...
Android အတွက် OfficeSuite Pro 6
Internet Download Manager 6.12 Build 24 Fina
Aviation 3D - Light Plane Live Wallpaper 2MB
ParetoLogic RegCure Pro v3
Road Runner Android Game 15MB
အသံတည်းဖြတ်တဲ့ MP3 Stream Editor 3.4
Fruity Loop Studio 10နဲ့ သီချင်းဖန်တီးချင်သူတွေအတွ...
Plants vs. Zombies Game for Win & Mac 26MB
မှော်ဆရာမနဲ့သရဲစစ်တိုက်ဂိမ်း For Android 108MB
ရဟက်လေယဉ် စစ်တိုက်ဂိမ်း 42MB For Android
ဂြိုလ်သား စစ်တိုက်ဂိမ်း အလန်း 82MB
Angry Birds Star Wars for iPhone/iPad/iPod Touch
Air Control v3.24 For Android Game
Panda Internet Security 2013 free for 6-months
DVD Ripper Pro Free For MacX
SlideShow Movie Creator Pro 5.1(22MB)
စကားပြန်ပြောတဲ့ ၀က်ဝံရုပ်လေး For Android (31MB)
စစ်တိုက်ချင်သူတွေအတွက် ဂိမ်းအလန်း For android(47MB...
Parking Challenge 3D For Android 24MB
လမ်းမပေါ်က သရဲတွေ အမုန်းပစ်မယ် 16MB
Angry Birds Star Wars v1.0.1 For Android
Whos On My WiFi v2.0.8
Super MP3 Download 4
စွမ်းအားရှင် တိုက်ပွဲဂိမ်း For Android 37MB
PowerDVD Mobile v4.0 For Android
Red Wing Ikaro Racing For Android Game 10MB
Remo Recover Windows 3.0
Bridge The Construction Pc Game
Super Ski Jump v1 For Android Game
Keys 08 November 2012
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့သော မေးခွန်းနှင့် ပြဿနာမျာ...
Computer Lessons For High School Vol-1 By U Zaw Li...
ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် စာအုပ် 14MB
O&O DiskImage 6.8 Professional Edition
နောက်ဆုံးUpdate ဆောစ့်ဝဲလ်တော်တော်များများ အတွက် လ...
Air Patriots v1.01 for Android Game
File Converter v4.80 For Android 1MB
Android အတွက် ငါးမျှားဂိမ်း 8MB
Android အတွက် မြင်းပြိုင်ဂိမ်း 22MB
Twist n' Catch v1.0.7 Android Game 18MB
Video Caller Id v1.11 For Android
ကွန်နက်နက်ရှင် မြန်အောင် အထောက်ပံပေးနိုင်သော Inter...
(8, 7, Vista, XP, Server) Activation
Ytalk for Android ရပါပီ..
Cut the Rope HD v2.0.1 For Android Game
icons မှာ မျှားလေးတွေ ဖြုတ်ချင်သူတွေအတွက်
Keys 04 November 2012
Night of the Living Dead v01 For Android Game 18.6...
ခပ်ကြမ်းမောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် MEGASTUNT Mayhem P...
မလိုတာတွေကို ကလစ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ဖြုတ်ပေးတဲ့ MenuUnins...
Folders ကို Open in new Windows နဲဖွင့်မယ်
Need for Speed™ Most Wanted for iPhone/iPad/iPod T...
Cowboy သေနတ်ပစ်ဂိမ်း For Android
Automatically Shutdown Windows PC
ဓာတ်ပုံကို ကာတွန်းပုံစံပြောင်းတဲ့ ဆိုဒ်များ
greeting card,invitation card,poster လုပ်ချင်တဲ့သူ...
go4up ကနေ ဒေါင်းမရဘူးပြောတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
လက်ကွက်လေ့ကျင့်လိုသူတွေအတွက် SOLO Typing Tutor
ကွန်ပျူတာမှာ ကာစာ အလန်းတွေနဲ့ သုံးကြမယ်ဗျာ
w3capture for Mac Free လိုင်စင်
Copyright © 2011 အမျိုးကောင်းသား | Powered by Blogger
Posted by naihan at 07:35